वित्त कम्पनी संघले भन्योः मौद्रिक नीति गज्जव आयो  Clickmandu
वित्त कम्पनी संघले भन्योः मौद्रिक नीति गज्जव आयो
क्लिकमान्डु २०७५ असार २८ गते १६:०५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीति सन्तुलित, आवश्यकता अनुसारको र ब्यवहारिक आएको भन्दै वित्त कम्पनी संघले स्वागत गरेको छ ।
विगतमा आफूहरुले माग गरेका विषय समेटिएको र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो मौद्रिक नीति आएको संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए ।
‘मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ, विगतदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका कतिपय विषय यसबर्ष सम्बोधन भएका छन्, अहिलेको आवश्यकलाई सम्बोधन गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत दिने गरी आएको मौद्रिक नीतिको हामीले स्वागत गरेका छौं,’ गुडविल फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका अध्यक्ष तुलाधरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
मौद्रिक नीतिले गुनासो सुनुवाइ समितिमा बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी संघका पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारी मात्रै सदस्य रहने ब्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै संघका पदाधिकारी सदस्य रहने ब्यवस्था गरेको हो । यो ब्यवस्थाले वित्त कम्पनीहरुको बिषयमा परेको उजुरी वा गुनासोको सही सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने तुलाधरको भनाइ छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपको लागि बोलकबोलमा भाग लिन प्रकाशित ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि २ प्रतिशतसम्म तल माथि गर्न पाइने ब्यवस्था थियो । यस्तो ब्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्ताको कारण सर्बसाधारण लगानीकर्ताले कम ब्याज पाउने समस्या टरेको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा सबैको लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि बाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत थियो ।
नयाँ ब्यवस्थाले अरु बैंक वित्तीय संस्था र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समान ब्यवहार गरेको तुलाधरले बताए । यस्तो समान ब्यवहारले फाइनान्स कम्पनीहरु पनि बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकहरुभन्दा कमजोर छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न भनेको छ । यस्तो ब्यवस्थाले वित्तीय पहुच बृद्धिमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ ।
बाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भन्ने ब्यवस्था विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिले बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भनिएको छ, यसमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि संलग्न गराउँदा अझ सहज र ब्यापक हुने भएकोले यसमा पुनर्बिचार गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष तुलाधरले भने ।
बैंकर्स संघले भन्यो- राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थामा पुनर्बिचार नगरे ब्याजदर अनियन्त्रित हुनसक्छ
बैंकहरुले असारसम्म १५ र पुसभित्र १० प्रतिशतमा कल डिपोजिट झानुपर्ने
स्प्रेडको नयाँ गणनाविधिले बैंकको आम्दानी ३२% ले घट्ने
ज्योति विकास बैंकले खोल्यो एकैपटक १० स्थानमा शाखा
माघमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको समस्या उस्तै: २४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर २३ अर्ब ऋण, सीसीडी टाइट
यी हुन् विश्वका ३६ उत्कृष्ट बैंक, शीर्ष स्थानमा चिनियाँ बैंक (सूचिसहित)
कृषि विकास बैंकको २१.०५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकलाई चिरायु अस्पतालमा उपचार गराउँदा १५ प्रतिशत छुट
‘सानो सोचले सानै सफलता र ठूलो सोचले ठूलै सफलता’
तपाईँको स्मार्ट फोन तात्यो ? यसो गर्नुहोस्
नयाँ नोट फोहोर हुन नदिन यसो गर्नुस्, झुत्रो भए के हुन्छ ?
क्यान्सर बिज्ञको सुझाव-रातो र पोलेको मासु नखानू